Brighton Oo Garaacday Arsenal Iyo Gunners-ka Oo La Kulantay Guul Daradii 3aad Oo Xiriir Ah %
Jabkii kooxda woqoyga London, ka dhisan ee Arsenal, ayaa wuxuu umuuqdaa mid sii socda, waxaana ay la kulantay guul daradii Saddexaad oo xiriir ah, kadib markii ay gurigooda ay ku booqdeen kooxda yar ee Brighton.
Inkastoo, wiilasha Arsena Wenger ay bandhig fiican la yimaadeen garoonka, hadana waxaa iska cadeed in la boobsiiyay qeybta koowaad gaara ahaan daqiiqadihii ugu horeeyay ee ciyaartaan xiisaha badneed.
Kulanka oo guud ahaan kusoo Idlaaday 2-1, ayaa waxaa qeybta koowaad lagu kala baxay 2-1, oo lagu hogaaminayo Arsenal, waxaana daqiiqadihii 7aad ku bilaabay Lewis Dunk halka 26aad uu ulabeeyay Glenn Murray.
Arsenal ayaa waxaa gool usoo celiyay ciyaaryahanka ay lasoo wareegtay bishii Janaayo, kaasoo dalka Gabon udhashay ee Pierre-Emerick Aubameyang, wuxuuna goolkiisa yimid daqiiqadii 43aad ee qeybta koowaad.
Markii dib leyskugu soo laabtay ciyaarta wiilasha Gunners-ka ayaa abuuray dhowr fursadood, kuwaasoo gool loo filan karay, waxaana ay ku dhawaaday inay iska Bareejeeyaan goolka qura ee ciyaartaan looga badiyay.
Ugu dambeyn, kulanka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday 2-1, oo lagu soo dhar-baaxay Arsenal, waxayna ka dhigan tahay in la garaacay kulankeedii saddexaad oo xiriir ah, kadib markii ay Isbuucii hore labo jeer ay ka badisay Man City.
Brighton vs ArsenalEPLPremier League